जहाजमा पाइलट र को-पाइलटलाई किन दिइन्छ फरक फरक खाना ? यस्तो छ रोचक तथ्य —
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार १२:५१ admin
प्रत्येक दिन संसारमा १ लाख जहाजहरू आफ्नो गन्तव्यमा उड्ने गर्छन् । छोटो दूरीदेखि लामो दूरीसम्म उड्ने जहाजमा लाखौँ यात्रीहरू यात्रा गरिरहेका हुन्छन ।
जहाजमा धेरैले सोच्छन्, फोहोरो ठाउँ के होला ? वास्तवमा त्यो ठाउँ ट्वाइलेट होइन बरू तपाईंहरूलाई खाना ल्याउने लैजाने ट्रे हो ।
ट्राभल म्याथले गरेको एक अध्ययनअनुसार ट्रेको प्रति वर्गइन्चमा २ हजार १ सय ५५ भन्दा बढी ब्याक्टेरिया हुन्छन् । तर ट्वाइलेटमा जम्मा २ सय ५६ ब्याक्टेरिया हुन्छ । जहाजमा खाना बाँड्ने ट्रे निकै कम सफा गरिन्छ ।
२६ आश्विन २०७८, मंगलवार १०:४३ admin 0
कतिपय मानिसहरुको सौख दाह्री पाल्ने । कतिले यसलाई फेसनको रुपमा पनि लिने गर्छन् । जहाँ १८...
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ००:५२ admin 0
विश्वमै सबै भन्दा लामो नाक भएका यि ब्यक्ती,जस्ले लेखे गिनिज बुकमा नाम
काठमाडौं । दुनियामा चर्चित हुनका लागि कहिलेकाहीँ आफ्नो नाकले पनि मद्दत गर्दो रहेछ । टर्कीका मेहमेत...
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार ०६:४२ admin 0
काठमाडौं । पृथ्वीको कूल भागको ७१ प्रतिशत पानीले ढाकेको छ। पृथ्वीमा चार भागमध्ये तीन भागजति पानीले...